Kumvulele umnyango kwezolimo ukuzihlupha ngezinhlobo zika-lettuce. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Yiloku okwamkhuthaza ukuthi asungule ibhizinisi njengoba ewumlimi ka-lettuce onomsoco nawudayisela izitolo ezihlukene ngakubo eRustenburg, eNorth West.
IRasogo Gardens wayisungula ngo-2020 ngomholo wakhe wokuba wunjiniyela, umsebenzi ayewenza ezinze eLephalale, eLimpopo. Le nkampani ikhiqiza izinhlobo zika-lettuce okuthiwa yi-Lollo Rossa (ongamahlamvu abomvu) neLollo Bondia (ongamahlamvu aluhlaza). Uqashe umuntu oyedwa.
URasogo uxoxele iVutivi News ukuthi wajwayela kanjani ukudla u-lettuce owawungenawo umsoco ngendlela ayecabanga ngayo.
“Kunezinhlobo zika-lettuce. Imvamisa abantu badla i-iceberg lettuce, imnandi kodwa ayinamsoco otheni. Kanti i-green oak, i-red oak ne-butter lettuce yizinhlobo zika-lettuce ezinomsoco futhi yizona okufanele uzidle uma ufisa ukunciphisa umzimba,” kusho uRasogo, othe ukuncintisana nabalimi abakhulu kunzima ngoba ziningi ezinye izinto okufanele ubhekane nazo. “Sincintisana nabalimi abadayisa u-lettuce wabo ngamanani aphansi. Kufanele mina ngikhombise ubuhle nobubi bokutshala ngaphandle kokusebenzisa inhlabathi kwabacabanga ukuthenga kithina nginqume amanani abiza kahle futhi ngikhumbule inzuzo yami.
Uhlobo luka-lettuce oluhlaza waseRasogo Gardens
“Yinto lena eyenzeka ngokuthi wenze ucwaningo olunzulu nokuba nomuntu ozokucathulisa. Ukuba nomuntu ozokucathulisa kuyasiza ugweme ukwenza amaphutha abantu abaningi abawenzayo uma beqala ibhizinisi.”
URasogo uthi akuzona zodwa lezi izinselelo abhekane nazo. Uthi enye yezinto ezihlale zimkhathaza yizindleko zokuthutha u-lettuce.
“Isigodi sethu (siqhele) ngamakhilomitha awu-60 edolobheni nokuzwelayo ephaketheni uma kufanele sicabange uphethroli nezindleko zokuhamba. Sesicabanga nokunabela nasedolobheni ukuze sibe seduzane nezinxanxathela zezitolo futhi sizokwazi ukudayisela izitolo eziningi ngamanani abiza kahle.
“Enye inkinga wukucinywa kukagesi. Uma ucinywa ugesi, umkhiqizo uyafa bese silahlekelwa yinzuzo. Sathenga i-generator ukugwema ukulahlekelwa yimali eningi uma kuhamba ugesi,” kwengenza uRasogo.
U-lettuce obomvu weRasogo Gardens uklele noluhlaza
Njengeningi losomabhizinisi abancane, ukholwa wukuthi ukusiza ukusungula imisebenzi ngenye yezinto ezinkulu asezizuzile. “Ukukwazi ukufaka isandla empini yokuntuleka kwemisebenzi yinto enkulu.”
URasogo unezinhlelo zokukhulisa ibhizinisi eminyaka emibili ezayo.
Facebook: Rasogo Gardens